के लिंगको आकार बढाउन साँच्चै सम्भव छ? – Health Post Nepal
के लिंगको आकार बढाउन साँच्चै सम्भव छ?
२०७८ फागुन १४ गते १८:०२
काठमाडौं – हरेक पुरुषको चाहना हुन्छ कि उसको लिंग लामो र मोटो होस्। किशोरावस्थादेखि नै केटाहरूमा अस्लिल फिल्म हेर्दा यस्तो चाहना जन्मन्छ। बोस्टनस्थित हार्वर्ड मेडिकल स्कूल एण्ड ब्रिघम एन्डा महिला अस्पतालका यूरोलोजिस्ट एम माइकल ओ’लेरी भन्छन्, ‘पुरुष लामो र ठूलो लिंगको लागि जे पनि गर्न चाहन्छन्।’ के साँच्चै लिंग लामो र ठूलो बनाउने उपाय छ त? यसबारे चर्चा गरौं।
लिंग ठूलो बनाउने भनेर थुप्रै औषधि र साधनहरुको प्रचार गरिए पनि ति उपायहरु खासै प्रभावकारी नभएको विज्ञहरुको दाबी छ। यदि यसरी लिंग ठूलो बनाउन मिल्ने भए सबै देशका अधिकांश पुरुषहरूको लिंग लामो र ठूलो हुने थिए।
त्यसकारण हालसम्म विश्वमा त्यस्तो कुनै प्रभावकारी औषधि वा यन्त्र छैन जसले लिंग ठूलो बनाउन सहयोग गरोस्। यति कुरा बुझ्दाबुझ्दै पनि पुरुषको यो चाहनामा कुनै कमी भएको छैन। उनीहरु थुप्रै औषधि र साधन प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। जसले धन मात्र होइन तपाईंको स्वास्थ्य र लिंगमा समेत गम्भीर असर गर्न सक्छ। केही पुरुषहरूले यसका लागि शल्यक्रियाको पनि सहारा लिएका हुन्छन्। यसले केही मात्रामा साइज बढाउन त सकिन्छ तर यो त्यति सहज भने पक्कै छैन।
अधिकांश पुरुषहरूलाई आफ्नो लिंगको साइजले चित्त बुझेको हुँदैन। यसको मतलब उनीहरू ठूलो लिंग चाहन्छन् किनकि सेक्स गर्दा आफूलाई पार्टनरका अघि शक्तिशाली देखाउन सकियोस्। सानो लिंग हुँदा आफू लज्जित हुनुपर्ने हो या सन्तुष्टि दिन नसकिने हो कि भन्ने पीरले उनीहरुलाई सताइरहेको हुन्छ।
औषधि, क्रिम, स्ट्रेचिङ डिभाइसजस्ता लिंग बढाउने साधन उत्पादन गर्नेहरु यसको मद्दतले लिंगको आकार बढाउन सकिन्छ भनेर प्रचार गरिरहेका हुन्छन्। कतिपयले यसका लागि शल्यक्रियाको सहारा पनि लिन्छन्। यद्यपि, युरोलोजी केयर फाउन्डेशनका अनुसार यी मध्ये कुनै पनि विधि प्रभावकारी छैनन्।
कसरी बढाउन सकिन्छ त लिंगको साइज?
शल्यक्रियाको सहायताले डाक्टरहरूले पेल्भिसलाई जोगाउने लिगामेन्ट काटेर पुरुषको लिंगको आकार बढाउन सक्छन्। तर यो प्रक्रियाले लिम्प लिंगको आकार मात्र ठूलो देखिन्छ। यसका अलावा शल्यक्रिया नगरी पनि लिंगलाई ठूलो बनाउने विधि छ। यसका लागि ‘रबर ब्यान्ड लेडेन डिभाइस’ छ। जसरी दाँतमा ब्रेसेस राखिन्छ त्यसरी नै यो उपकरणलाई लिंगमा लगाइन्छ। जसले पुरुषको लिंगलाई आधा इन्चसम्म ठूलो बनाउने बताइएको छ।
लिंगलाई मोटो बनाउन सर्जिकल इम्प्लान्ट पनि गरिन्छ। जसमा लिंगको छालाभित्र सिलिकन घुसाइन्छ। जसका कारण लिंगको आकार मोटो त देखिन्छ तर यसले लिंगको बनावट नै नराम्रो देखिनुका साथै संक्रमणजस्ता जटिलता पनि आउन सक्छन्। यस्तो भयो भने तपाईंको लिंग कहिल्यै पनि सामान्य हुन सक्दैन।
अहिलेसम्म कुनै पनि चिकित्सा संस्थाले सामान्य लिंगका पुरुषलाई यस्तो शल्यक्रिया गर्न अनुमति दिएको छैन। विज्ञहरुका अनुसार यो सुरक्षित पनि छैन र यसको प्रभाव पनि कम छ। यस सम्बन्धमा केही अध्ययनहरू पनि भएका छन्। जसले लिंगहरु बढाउने उपाय प्रयोग नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। कहिलेकाहीँ गलत शल्यक्रियाका कारण मानिसले जीवनभर यसको पीडा भोग्नु पर्ने पनि विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। यदि तपाईंले यस्ता उपायहरुको अवलम्बन गर्नु भयो भने संक्रमण हुने, यौन इच्छा कम हुने, नपुंसकता, लिंगको उत्तेजनामा समस्या, इरेक्टाइल डिस्फंसनजस्ता समस्या पनि आउन सक्छन्।
यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ कि लिंगलाई मोटो र ठूलो बनाउने सुरक्षित उपाय के हो त? इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा यसको जवाफ तपाईं कहिल्यै पाउनु हुनेछैन। यदि तपाईंले सल्यक्रिया नै गराउनु भयो भने पनि तपाईंले चाहेको साइज जति नबढ्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा फेरि तपाईंमा लिंगको साइजलाई लिएर सन्तुष्टि नहुन सक्छ। तसर्थ तपाईंसँग जे छ त्यही कुरामा खुसी हुन सिक्नुस्। लिंगको साइजले तपाईं र तपाईंको पार्टनरले पाउने सन्तुष्टिमा कुनै असर गर्दैन। बरु सेक्सलाई कसरी यादगार र सुखमय बनाउने हो त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नुस्।